मन्त्रिपरिषदमा रहँदा रावलले किन एमसीसी पास गरेको ? – Nepal Japan
मन्त्रिपरिषदमा रहँदा रावलले किन एमसीसी पास गरेको ?
नेपाल जापान ३० फाल्गुन १९:२५
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को चर्को बिरोध गर्ने एमाले नेता भीम रावललाई आफू नै रहेको मन्त्रिपरिषद्बाट सो सम्झौता किन पारित गरेको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले यस परियोजनाको विरोध गर्ने एमाले नेता भीम रावलले आफैं मन्त्रिपरिषद्मा रहँदा सो परियोजना पास गरेको तर अहिले आएर विरोध मात्र गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो ।
आज नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै सो धारणा राख्नुभएको हो ।
सो कार्यक्रममा उहाँले हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको एमसीसी परियोजनाका बारेमा गरिएका नकारात्मक टिप्पणीहरु भ्रममात्र भएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाको प्रश्न थियो, “आफैँ मन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेका भीम रावलले त्यसबेला किन आलोचना गर्नुभएन ? त्यतिबेला राजीनामा नदिएर के हेरेर बसेको ? आफू पार्टीको नेता र मन्त्री हुँदा आफैँले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने अनि अहिले किन विरोध गर्दैछन् ? विरोध गर्ने भए त्यसैबला मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बाहिर आउनुपर्दैनथ्यो ?”
प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा ल्याएको प्रस्तावलाई आफूले पारित गरेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले रावल मन्त्री हुँदा एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढेको पटक पटक सुनाउनुभयो ।
उहाँले सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एमसिसीका बारेमा जवाफ दिनैपर्ने भो भन्दै पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता रावलप्रति आक्रोश पोख्नुभएको थियो ।